501 writzọ mkpirisi nke Amy Harrison | Martech Zone
Amy Harrison, onye na - ede ihe maka ndị ọchụnta ego na ndị nchịkwa, ka edepụtara na blọọgụ kacha mma ederede na net. Amy weputara ebook maka $ 17 nke kwuru banyere ụfọdụ nke ahịrịokwu na ọkacha mmasị ya yana ụfọdụ okwu na ahịrịokwu ọ chọpụtara ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na ndị na-edegharị ederede.
Usoro Ntuziaka Guidezọ mkpirisi gụnyere:
Wzọ 30 maka isi okwu igbu ọchụ - N’ebe a ka inwetara ndebiri iri atọ (yana aro okwu ị ga - eji jupụta ebe a na - emechi ya) ka ị nwee ike wepụta isi okwu maka azụmaahịa gị ma ọ bụ blọọgụ gị nke na - agwa ndị ahịa gị ihe ị na - eme (na ihe kpatara ha ga - eji na - agụ akwụkwọ a) ) na sekọnd.
Ahịrịokwu 104 iji mee ka ọ bụrụ mkparịta ụka - know maara ka ụfọdụ ndị ode akwụkwọ si ejigide mkparịta ụka mkparịta ụka nkịtị nke mere na ọ dị gị ka ị na-ejikọ onye dị adị karịa ịgụ ntụziaka maka ihe ọkpụkpọ DVD gị? Ọ dị ebe a bụ okwu mkparịta ụka na nkebi ahịrịokwu iji nyere gị aka ime otu ihe ahụ.
Wzọ 54 iji belata ahịhịa - Mgbe ike gwụrụ anyị, anyị bidoro ikwu okwu banyere “ihe” na “ihe” na ihe niile “ịgaghị agwa m ihe ọ bụla akọwapụtara nke ọma” okwu nwere ike ime ka ederede gị bụrụ ihe echefuru echefu dịka ebe ị hapụrụ igodo ụgbọ ala gị… Nkebi a na-egosi gị otu ị ga - esi gbochie nke a.
Ahịrịokwu 75 maka agbakwunye POW! - Trygbalị ijide ike ahụ peppy mgbe ihe edemede gị nke atọ siri ike, ọ dịkwa mfe ịbanye n'ime “nnukwu, ezigbo, oke mma” asụsụ nke na-atọ ụtọ dị ka ọdịnaya nke drawer salad na ngwa nju oyi m. Jiri okwu ndị a mgbe ịchọrọ ịda ụda dị ka ike niile nwa nkita nwere. (Ningdọ aka na ntị - ndị a bụ okwu ike, naanị ị chọrọ ncha ọkụ iji weta nnomi gị ma ọ bụ blọọgụ gị na ndụ!)
Wzọ 87 iji mee ka mgbu onye ahịa gị nwee - Ka ị na - akọwakwu ihe banyere nsogbu ma ọ bụ nsogbu ndị ahịa gị chere, ha ga - anabata ihe ị na - ekwu na ị ga - eme maka ya. Gosi ha nke ọma na ị ghọtara kpọmkwem ihe ha na-agabiga.
Ahịrịokwu 80 iji gosi ha mmetụta ha ga-enwe - Mgbe ha sere ihe osise nke mgbu ha, ị ga - enwe ike kọwaa etu ha ga - esi nwee mmetụta mgbe ha debanyere aha na blọọgụ gị, zụta ngwaahịa gị ma ọ bụ goro gị ụgwọ ọfụma? Gbanye na ngalaba a mgbe ịchọrọ ịkọwapụta nsonazụ niile dị ịtụnanya ha nwere ike ịtụ anya site na isoro gị rụọ ọrụ.
Wzọ 71 imechi azụmahịa ahụ - O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị na-ege gị ntị na-agụ ihe, ma ọ bụ banye na akwụkwọ akụkọ gị, ma ọ bụ sonyere ọgbakọ ndị otu gị ma ọ bụ zụta eBook ị ga-eme ka ha mara ihe ha ga-eme na ihe kpatara ha ji eme ya. Nkebi ahịrịokwu ndị a na-egosi gị na enwere ụzọ karịrị 1 iji mee ka onye ahịa gị mee ihe.
Nkebi ahịrịokwu nke mmadụ ” - gụnyere bụ ngalaba ebe ị nwere ike idekọ ahịrịokwu nke onwe gị, ma ọ bụ ahịrịokwu ndị ọzọ nwere ike ịbụ ihe doro anya maka ahịa gị, mpaghara na obere obere ọ bụla "ị-isms." Ọ ga-eju gị anya na otu ihe ndị a nwere ike isi kwụsị ịde ederede belụsọ ma ị maara banyere itinye ha.
Jiri njikọ njikọ anyị ma were otu akwụkwọ a dị ịtụnanya taa!
501 writzọ mkpirisi Detuo
Tags: oyiridetuo ederedeibe editọ peejina-eme ka o kwenyenkwukọrịta ahịa